Ukuphupha kwegumbi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Amagumbi esizifumana sikuwo mihla le athetha lukhulu ngobuntu bethu. Xa singena ezindlwini zabanye abantu ezantsi eholweni, ngokungazi sibona izinto zegumbi ngalinye kwaye senza uluvo ngokusekwe kwiinkcukacha. Ngaba kukho iintyatyambo etafileni, ngaba ikhona imifanekiso eseludongeni? Ngaba isilingi siphantsi okanye sibanzi kwaye siphezulu? Ngaba uyatya kwaye ulale kwigumbi elinye okanye ngaba kukho igumbi elahlukileyo lomsebenzi ngamnye?
Emva kwentshukumo sinokuziva sizalwa ngokutsha kuba sinokunikezela ngamagumbi amatsha ngokupheleleyo, sihombise ngendlela esifuna ngayo kwaye siyile ngobuntu bethu, kwaye ngamanye amaxesha utshintsho lobomi kufuneka luxhaswe lutshintsho lwendawo.
Kodwa igama "isithuba" likwathetha ukungabonakali, endaweni yezikweko ezisingqongileyo. Ke abantu abahlukeneyo banokukhetha umgama ohlukileyo. Oku kuthetha ukuba bathwala "umgama wabo" bebangqongile njengendawo ephathekayo. Ukuba umntu wasemzini ungena kwesi sithuba singabonakaliyo siwela ngaphantsi komgama, umntu ekubhekiswa kuye uziva engakhululekanga, kwaye esongelwa. Ke, rhoqo, ngokuzenzekelayo uthabatha inyathelo lokubuyela umva ukunyusa umgama kwakhona.
Ithetha ntoni isimboli yephupha "isithuba"? Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha lwenza isiseko sokutolika. Ngaphambi kokwenza oku, singathanda ukujonga ezona ndawo zixhaphakileyo zamaphupha ngamagumbi kunye nokutolika kwawo:
1 Isimboli yamaphupha «Indawo» -Amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Claustrophobia! Indawo emxinwa njengephupha
1.2 Kumnyama njengobusuku ... ukutolikwa kwamaphupha «igumbi elimnyama»
2 Uphawu lwephupha «indawo» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «indawo» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «indawo» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «Indawo» -Amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Claustrophobia! Indawo emxinwa njengephupha
Ukuba ukwindawo emxinwa ephupheni, amandla akho okusikelwa umda aya kubonakala kubomi bokwenyani. Umntu oleleyo uhlala eziva ethintelwe kwinkululeko yakhe nakumathuba ophuhliso lomntu. Iphupha linokuboniswa nangephupha lendawo emxinwa ohamba kuyo ngengqondo emxinwa kakhulu el mundo. Isimboli inokuqondwa njengesimemo sokuzikhulula kwizinto ezikuthintelayo kwaye uzame izinto ezintsha.
Kumnyama njengobusuku ... ukutolikwa kwamaphupha «igumbi elimnyama»
Ukuba kwigumbi elimnyama eliphuphileyo eliye lajika laba mnyama ngokupheleleyo kubonakala kutoliko lwephupha njenge-harbinger yophuhliso olubalulekileyo ebomini bokwenyani. Iimeko zokuphila ezintsha zibonakala zingaziwa ekuqaleni kwaye umntu oleleyo akakafundi ukuziqhelanisa. Nangona kunjalo, bakunika amaxesha amaninzi okonwaba kunye namathuba athembisayo emva koko.
Umfanekiso ofana nephupha wegumbi elimnyama okanye igumbi lokulala ngokubanzi elinamagumbi amnyama linokubonisa uloyiko ngephupha lokuqhubela phambili kubomi bemihla ngemihla kwaye usebenzise amathuba avelayo.
Uphawu lwephupha «indawo» - ukutolikwa ngokubanzi
Isithuba ephupheni sibonisa imiba ye- ubuntu. Amaphupha amaninzi, aqulathe isimboli yephupha "isithuba," malunga namagumbi angenanto okanye amatsha kwigumbi lomntu ophuphayo okanye mhlawumbi kwindlu yabazali bakhe, amagumbi angazange awabona ngaphambili okanye abonakala engaqhelekanga kuye. Ingabonisa utshintsho oluza kwenzeka kubomi bephupha, okanye iipropathi azibona zincinci kuye kude kube ngoku.
Ngamanye amaxesha kukwa malunga neendawo zabo zokuba umntu ophuphayo aphele. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba igumbi ongena kulo ephupheni limnyama, liyimfihlakalo, liyothusa, okanye kunzima ukufikelela kulo. IWindows kwipatiyo inokusetyenziselwa Imiba ecinezelweyo Ukuma, ngelixa okwaziwayo, ukuba kukuphupha ntoni okanye ukwamkela ngokwakho, kufuziselwa ngamagumbi akhanyisiweyo kwaye anikwa yonke imihla ngaphambili kwesakhiwo.
Ukuba abanye abantu bahlala kumagumbi amaphupha, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kubo. Ngaba uyaziwa okanye awaziwa? Indlela oziphatha ngayo Banokufuzisela iinkalo zobuntu, kodwa bakwamele abahlobo okanye abo banxulumana nabo abagqithe kakhulu kumda osondeleyo wephupha nalapho bazive bekhathazwa khona.
Ukufakelwa kunokubonelela ngolwazi oluthe kratya ekutolikeni uphawu lwephupha. Ukuba igumbi alinanto kwaphela, oko kunokuthetha ukuba nesizungu, kodwa kunye neprojekthi efuna igalelo elininzi lomntu. Igumbi lokuphola elinempahla entle kufuneka likhanyisiwe Suerte nezemali butyebi Ngelixa usalatha ifanitshala engacacanga kunye nemigangatho emdaka kuyo inhlanhla kuba.
Kwelinye icala, igumbi alinampahla ifanelekileyo, nefenitshala ekufundwa kuyo imeko yemali embi, uphawu lwephupha lubonisa ukuba iphupha liza kufumana uncedo kungekudala, ukuba awuwedwa kwaphela. Igumbi elingaqhelekanga limele UtshintshoEzinokubandakanya utshintsho lwendawo, iphupha lingaphumelela nokuba bekufuneka ulwe ixesha elide.
Ukuba, ngokuchaseneyo, uhlala kuphela kumagumbi osapho ephupheni, unyathela umhlaba, ke ubomi bumile, uzinze kamnandi kwinkqubo efanayo kwaye akabi nabuganga bokushiya imeko yosapho. Igumbi eligungxuliweyo linokuhlala liqondwa njengesilumkiso sokulahleka.
Ukuba iphupha livaleleke egumbini, ukuba iifestile neengcango zivaliwe okanye zithintelwe, uphawu lwephupha lumele ukuziva, utshixiwe ngaphandle yiba yiyo. Ukuphupha uziva uthintelwe, nokuba kungabanye okanye ziimeko zakho.
Uphawu lwephupha «indawo» - ukutolikwa kwengqondo
Isithuba ophupha ngaso sinokukwenza oko engekho zingqondweni umele kwaye ubonise ubudlelwane bephupha kunye neendawo ezingabonakali kakuhle zobuntu bakho okanye ukuqonda. Ukuba uphuma kwigumbi eliqaqambileyo uye kwelimnyama, ungene nzulu kuwo. Icinezelwe kwaye zifihliwe. Ifenitshala egumbini ephupheni ithetha lukhulu apha.
Isithuba sinokuthi ngokufuziselayo sikwindawo apho iphupha likujikeleze khona okanye ekuboneni kwakho ngokwakho ukuphuhlisa ubuntu bakho kwaye uphile into onqwenela ukuyifeza ebomini. Bonisa amagumbi amancinci naphantsi Ukunqanda kwezi ndawo, ngelixa amagumbi amakhulu kwaye aqaqambe kakhulu athetha ngento yokuba umntu ophuphayo angazisebenzisa ngokupheleleyo iitalente kunye namandla akhe.
Kwamanye amaphupha indawo imele bona Imfihlo ukuphupha, owenzakeleyo ungazi okanye wonzakaliswe ngabanye abantu ngokungena kule ndawo - indawo yobuqu - ungakhange ubuzwe.
Uphawu lwephupha «indawo» - ukutolika kokomoya
Ngokomoya ngokwasemzimbeni kwigumbi njengophawu lwephupha. indawo yezendalo, iziko lendalo iphela. Yindawo eya kuma ukuvavanywa kwexesha, eya kuhlala nokuba konke kudlula. Into eyayikho ngaphambi kokuba abantu badlale indima kwindalo iphela.
Ukuphupha malunga nayo kukhokelela kwimbonakalo yakho kumfanekiso omkhulu kwaye uzibeke ngokunxulumene infinito.